နောက်တွဲယာဉ်ဘေးထွက်များအတွက်စာရွက်သတ္တု | YK လူမီနီယမ်
ဘယ်အချိန်မှာ၏စကားပြော နောက်တွဲယာဉ်နှစ်ဖက်များအတွက်စာရွက်သတ္တု, ၎င်းကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် 5000 စီးရီး. လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, နောက်တွဲယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများစွာကသံမဏိပြားများကိုအသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမယ့်အချိန်ပြီးနောက်, သံမဏိပြားများသည်သံချေးနှင့်ချေးများတတ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်, အရာသည်အလွန်နောက်တွဲယာဉ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုစေခဲ့သည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, ယခင်ကသံမဏိပြားများကိုအလူမီနီယမ်ပြားများဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်. လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြားများသည်ဓာတ်တိုးနိုင်မှုကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ချေးခုခံခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သံချေးခုခံ. ဖြည့်စွက်ကာ, အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသံမဏိပြားများ၏အရည်အသွေးသည်သံမဏိပြားများထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသောကြောင့်နောက်တွဲယာဉ်၏သယ်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်.
နောက်တွဲယာဉ်နှစ်ဖက်အတွက်ဘုံလူမီနီယံသတ္တုပြားပါဝင်သည် 5083 နှင့် 5454 လူမီနီယံအလွိုင်းပြား. ဟိ 5000 စီးရီးအလူမီနီယံသတ္တုစပ်အဓိကအားလူမီနီယမ် - မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များဖြစ်ကြသည်, သောကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဂဟေ, ကောင်းသောအအေးခံနိုင်မှု, နှင့်အလယ်အလတ်အစွမ်းသတ္တိကို. ၏အားသာချက်များ နောက်တွဲယာဉ်အတွက်လူမီနီယံစာရွက် နှစ်ဖက်:
1, နောက်တွဲယာဉ်တွင်အသုံးပြုသောအလူမီနီယံသတ္တုပြားသည်ထရပ်ကားတစ်ခုလုံး၏အရည်အသွေးကိုအချို့သောအတိုင်းအတာအထိလျှော့ချနိုင်သည်, နောက်တွဲယာဉ်ကိုယ်ထည်ရဲ့ပေါ့ပါးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါ, အားဖြင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်, လောင်စာဆီထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်, နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသေချာစေရန်;
2, လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြားသည်ကောင်းသောဓာတ်တိုးနိုင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ချေးခုခံ, နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သံချေးခုခံ. လူမီနီယံအလွိုင်းနောက်တွဲယာဉ်သည်သက်တမ်းကြာရှည်သည်; at the same time, ကလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပုံဖော်ရန်လွယ်ကူသည်, အရာပစ္စည်းစွန့်ပစ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ချွေတာခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသည်;
3, နောက်တွဲယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ဂဟေစွမ်းဆောင်ရည်ကသာလွန်သည်, အရာယာဉ်၏လုံခြုံမှုအချက်တိုးပွားစေပါသည်;
4, လူမီနီယံ၏အလေးချိန် နောက်တွဲယာဉ်နှစ်ဖက်အဘို့အသတ္တုပြား အလင်းပေါ့. သံနောက်တွဲယာဉ်နှင့်လူမီနီယံနောက်တွဲယာဉ်တို့၏အလေးချိန်အောက်တွင်ရှိသည်, လူမီနီယံနောက်တွဲယာဉ်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုသယ်ဆောင်;
5, လူမီနီယမ်အလွိုင်းသည်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်.